အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရလို့ လှလှပပ ပြန်လည် လက်စားချေခဲ့ကြသူများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရလို့ လှလှပပ ပြန်လည် လက်စားချေခဲ့ကြသူများ
September 20, 2021 Shwe Khit Online TV Amazing 0
လက်စားချေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စအပေါ် Shwe Khit ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုထင်မြင်လဲမသိဘူးနော်။ ကောင်းတဲ့ကိစ္စလား၊ မကောင်းတဲ့ကိစ္စလား ဆိုတာပေါ့ …
အီတလီလူမျိုးတွေမှာတော့ စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ လက်စားချေခြင်းဆိုတာ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေး ထားတဲ့ဟင်းပွဲတစ်ခုလိုပါပဲတဲ့ …. ကိုယ့်အပေါ်ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲခဲ့တဲ့ သူတွေကို လှလှပပ လက်စားပြန်ချေပြီး အဲ့အရသာကို မိန့်မိန့်ကြီးခံစားပါတဲ့။ shwekhitonlinetv.com
ဒီလို လက်စားချေတာဟာ ကောင်းလားဆိုးလား။ မှန်လားမှားလား မပြောတတ်ပေမယ့် ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းကြံတဲ့သူတွေကို အလိမ္မာနည်းသုံးပြီး လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ရပ်တွေတော့ အပြင်လောကမှာ အမှန်တကယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေထဲကမှ ရွှေခေတ်ပရိသတ်ကြီးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ထင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်အချို့ကို အခု ဆောင်းပါးလေးမှာ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် … shwekhitonlinetv.com
ဒေ့ဗ်ကာရိုးလ် (Dave Carol) ဆိုတာကတော့ ဂီတပညာရှင်တစ်ဦပါ။ သူ့ရဲ့လက်စားချေတဲ့ အကွက်လေးကလည်း လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလုံး ကိုအကြီးအကျယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ် စေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
သူ့ဂစ်တာဟာ လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပေါ့ဆမှုကြောင့် ကျိုးပဲ့သွားခဲ့ပေမယ့် လျော်ကြေ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရခဲ့ပါဘူး။ အမေရိကန်အခြေစိုက် United Airline က ဘောင်ထဲကနေ ကာရိုးလ်ရဲ့ ကိစ္စကိုဖြေရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ခရီးရဲ့ နစ်နာမှုအပေါ်တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့ခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြီး (၉) လလောက်အကြာမှာတော့ ကာရိုးလ်က သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြီး အွန်လိုင်းမှာတင်လိုက်ပါတယ်။ သီချင်းထဲမှာပါတဲ့ စာသားတွေက လေကြောင်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ ဂီတပညာရှင်တစ်ဦးအပေါ်မတရား အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ပုံပြင်လေးပေါ့ … shwekhitonlinetv.com
ကာရိုးလ်ဟာ အွန်လိုင်းမှာ နာမည်အနည်းငယ်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်တာမို့ ဒီ Video ဟာ တစ်ရက်တည်းကို ကြည့်ရှုသူ (၁) သိန်းခွဲထိရှိခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး United Airline ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာ ကာရိုးလ်ကို ဆက်သွယ်ပြီး တောင်းပန်ကာ နစ်နာကြေးတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Video ဟာအတော်လေးပျံနှံ့နေပြီ ဖြစ်လို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဂုဏ်သတင်းနဲ့ပုံရိပ်ကတော့ အကြီးအကျယ်ထိလိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
သူခိုးတွေထဲမှာတော့ ဒီသူခိုးတွေကအတော်လေးကံဆိုးတယ်လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဟက်ကာတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ပ်တော့တစ်လုံးကိုခိုးယူခဲ့မိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
မာ့ခ်ဘောင်း (Mark Bao) ဆိုတာကတော့ (၁၈) နှစ်အရွယ်ချာတိတ်တစ်ဦးပါ။ သူဟာ (၅) တန်းအရွယ်ကတည်းက Application တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတက်တဲ့အထိ နည်းပညာဘက်မှာ ပါရမီရှိတဲ့ ဟက်ကာတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူ့ရဲ့လက်ပ်တော့ဟာ ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘောင်းက ရဲမတိုင်ခဲ့ပါဘူး။ shwekhitonlinetv.com
သူ့ဆီကခိုးယူသွားတဲ့ သူခိုးတွေကို ပညာတွေပဲဆက်တိုက်ပြပြီး စိတ်ဆင်းရဲအောင် နေ့စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်တွေဖန်တီးတာကာ သူ့ လက်ပ်တော့ဆီပို့တာမျိုး သူခိုးတွေကို လှောင်ပြောင်ပြီးကခုန်တဲ့ Video File တွေကို သူခိုးတွေမြင်အောင် သူ့လက်ပ်တော့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ပြတာမျိုးတွေကို လုပ်ခဲ့ပါသတဲ့။ shwekhitonlinetv.com
အဆိုးဆုံးကတော့ သူ့လက်ပ်တော့ကို သုံးမိတဲ့ သူခိုးတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ အကုန်လုံးကို ဘောင်းက ရရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူခိုးတွေဟာ သူ့ကိုတောင်းပန်ကြောင်း စာလွှာနဲ့အတူ သူ့လက်ပ်တော့ ကိုပြန်လည်ပေးအပ် ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ကယ်လီဖိုးနီးယား မှာ နေထိုင်တဲ့လယ်သမားတစ်ဦးရဲ့ လက်စားချေတဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ ရန်ကိုရန်ချင်းတုံ့ပြန်သလို ထင်ရပေမယ့် သူ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ အခြားသူတော်တော်များများ အနေနဲ့လဲ ဒီလိုပဲလုပ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး …. shwekhitonlinetv.com
အမှိုက်ပေါင်းစုံ တင်လာတဲ့ အမှိုက်ကားတစ်စီးက သူ့လယ်ကွင်းနားမှာ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် အမှိုက်တွေလာသွန်နေတာကိုး … ဘာလို့ အဲ့ဒီလိုလုပ်ရသလဲမေးတော့လည်း အကြောင်းပြချက်မရှိ မချေမငံပြန်ပြောခံရပါတယ်တဲ့။ shwekhitonlinetv.com
သူ့လယ်ကွင်းထဲမှာ တစ်နေ့တစ်ခြားများပြားလာတဲ့ အမှိုက်ပေါင်းစုံကိုကြည့်ပြီး စိတ်ညစ်နေရုံကလွဲပြီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ အဲ့အမှိုက်တွေထဲကနေ စာအိတ်အပိုင်းအစကလေးတစ်ခုကို သူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
သေချာကြည့်လိုက်တော့ သူ့လယ်ထဲ အမှိုက်တွေလာချနေတဲ့ သူတွေ့ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီမှာတင်ပဲ သူလည်းသိပ်အများကြီးမစဉ်းစားနေဘဲ သူ့ထရပ်ကားပေါ် လယ်ထဲကရှိသမျှ အမှိုက်တွေအကုန်တင်ပြီး လိပ်စာထဲမှာပါတဲ့ လူရမ်းကားတွေရဲ့ အိမ်နားမှာ အကုန်လုံးပြန်သွန်ချခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒါကတော့ အားကစားနယ်ပယ်မှာ လူတော်တော်များများသိပြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဝေဖန်ရှုံ့ချသူတွေအများအပြားရှိသလို ထောက်ခံအားပေးသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ (၁၉၉၇) ခုနှစ်က မန်ယူကစားသမားရွိုင်ကိန်းဟာ လိဒ်ယူနိုက်တက်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ အရွတ်ကြောဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
လိဒ်ယူနိုက်တက်ကစားသမား ဟာလန်းရဲ့ဆိုးရွားတဲ့ ဘောလုံးဖျက်ထုတ်မှုကြောင့် ဒီဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိန်းဟာ လက်ကျန်ဘောလုံးရာသီတစ်ခုလုံး အနားယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအားအားလုံးက မေ့မေ့လျော့လျော့ ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် ရွိုင်ကိန်းတစ်ယောက်ကတော့ ဟာလန်းကိုလက်စားချေခွင့်ရဖို့ စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
(၂၀၀၁) ခုနှစ် ဧပြီလမှာတော့ မန်ချက်စတာဒါဘီအဖြစ် မန်ယူအသင်းနဲ့ မန်စီးတီးအသင်းတို့ ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ယခင်လိဒ်ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ဟာလန်းက မန်စီးတီးကစားသမား အဖြစ် မန်ယူအသင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။ ဟာလန်းအနေနဲ့ ကတော့ဒီပွဲဟာ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ shwekhitonlinetv.com
ဟာလန်းကိုလက်စားချေခွင့်ရဖို့ အငြိုးတကြီးစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ရွိုင်ကိန်းကတော့ အခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မှာပဲ ဟာလန်းအပေါ် ကြမ်းတမ်းစွာပြုမူခဲ့ပါတော့တယ်။ ရွိုင်ကိန်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကြမ်းတမ်းစွာဘောလုံးဖျက်ထုတ်မှုကြောင့် ဟာလန်းတစ်ယောက် ဒီဒဏ်ရာနဲ့ပဲ ကစားသမားဘဝက အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။
၅။ (၁၆၀) ကီလိုဂရမ်လေးတဲ့ ဒေါ်လာ (၇၅၀၀)
အမေရိကန်က ဘရန်ဒီလီ (Brandi Lee) လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ညဏ်ကောင်းချက်ကလဲ သူ့ခင်ပွန်းဟောင်းကို ခံရခက်စေမှာအမှန်ပါပဲ။ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ သူမသူငယ်ချင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာကို သိပေမယ့်လည်း လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြဖို့ သက်သေမရှိလို့ နေ့စဉ်စိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့ ပါသတဲ့။ shwekhitonlinetv.com
သူမရဲ့ ခင်ပွန်းကလည်း လျော်ကြေးရမှသာကွာရှင်းပေးမယ်လို့ ဆိုတာကြောင့် ဘရန်ဒီလီ ရဲ့ အဖြစ်က မိအေးနှစ်ခါ နာလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ အသည်းနှလုံးလဲကွဲတဲ့အပြင် များပြားတဲ့ငွေကြေးပါထပ်ကုန် ရမှာဖြစ်ပေမယ့် မခံစားနိုင်တဲ့ အဆုံးမှာတော့ တရားရုံးကိုသွားရောက်ပြီး နစ်နာကြေးပေးကာ ကွာရှင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းကတော့ တရားခွင်ထဲမှာအတော်လေးကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်လို့ သူတို့မိတ်ဆွေ တွေကတော့ဆိုပါတယ်။ တရားရုံးက ကွာရှင်းတဲ့အနေနဲ့ ဘရန်ဒီက သူ့ခင်ပွန်းကိုနစ်နာကြေး ဒေါ်လာ (၇၅၀၀) ပေးဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘရန်ဒီလည်း ဒီငွေကိုပေးဖို့ ဘဏ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ဇာတ်လမ်းကို စာနာသနားသွားတဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကူညီမှုကြောင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို အကောင်းဆုံးလက်စားချေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေက (၁၀) ဆင့် အကြွေစေ့ တွေနဲ့ ဒေါ်လာ (၇၅၀၀) ပြည့်အောင်လဲပေးလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁၀) ဆင့် အကြွေစေ့တွေချည်း ပဲ ဒေါ်လာ (၇၅၀၀) ပြည့်အောင်ရေတွက်ကာ ထည်းပေးလိုက်တဲ့ သေတ္တာက အလေးချိန် (၁၆၀) ကီလိုဂရမ်လောက်လေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခင်ပွန်းကတော့ ဒီ ဒေါ်လာ (၇၅၀၀) တန် (၁၀) ဆင့်အကြွေသေတ္တာကြီးနဲ့ ဘယ်လိုတောင်ဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုတော့ တွေးသာကြည့်ပါတော့ ပရိသတ်ကြီးရေ။ shwekhitonlinetv.com
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ။ ဒီစာလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ ရွှေခေတ်ပရိသတ်ကြီး အယောက်စီတိုင်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော် …
မြင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်မျက်လုံးကိုယ် မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်စေမယ့် ဓာတ်ပုံများ